Njem Nleta Africa: Nkwupụta nke Kinshasa na-eme ka njem nlegharị anya dị ka onye na-anya ụgbọ ala na nchekwa gburugburu ebe obibi
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ » Njem Nleta Africa: Nkwupụta nke Kinshasa na-eme ka njem nlegharị anya dị ka onye na-anya ụgbọ ala na nchekwa gburugburu ebe obibi
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na DR Congo • Akụkọ Ọchịchị • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a
Otu izu kpụ ọkụ n'ọnụ nke ahụmịhe ahụ na ikike iwulitere anụ ọhịa na ichekwa ihe dị iche iche dị iche iche emeela na Kinshasa, Democratic Republic of Congo. Isi ihe sitere na ebumnuche mpaghara nke dị n'okpuru atụmatụ nke UNWTO / Chimelong Initiative na Nchekwa Anụmanụ na Sustainable Tourism bụ Mkpokọta nke Mgbakọ Ọgbakọ na-arụ ọrụ iji chịkọta usoro ọzụzụ ọzụzụ njem emere na 2017 niile gbara ndị obodo na ndị njem metụtara njem ume. na-eme dị ka ndị mmeri nke ichekwa ihe ndị dị ndụ na nchebe gburugburu ebe obibi. N'ihi nke a, ihe kariri mmadụ 120 bụ ndị a zụrụ n'afọ gara aga site na Niger, Gabon, Benin, Guinea na Democratic Republic of Congo maka etu esi ahazi ma mejuputa atumatu mpaghara maka njem na anụ ọhịa na mba ha dị iche iche, nke ha gosipụtara n'oge ọgbakọ a.
Na-emepe ọgbakọ ahụ, nke nabatara ihe karịrị mmadụ 100 sitere na mba ise na mgbakwunye na Zimbabwe, Mịnịsta njem na Democratic Republic of the Congo, Franck Mwe di Malila Apenela gosipụtara "mkpa dị mkpa nke njikọ dị n'etiti mmepe njem na nchekwa nchekwa ihe dị iche iche. "Nakwa na" ọ bụghị ihe ndabara na UNWTO Agenda na-abịa maka Africa encaps it as one of her key priorities ". Maazị Shanzhong Zhu, onye isi nchịkwa UNWTO, kwuru na "nsonaazụ ndị e gosipụtara n'oge ogbako a ga-enye ohere iji mepụta uru akụ na ụba ma na-akpali nchedo na njikwa kwesịrị ekwesị nke ụdị dị iche iche dị iche iche na mmepe mmepe nke njem".
Emere mmeghe ahụ bụ onye isi okwu na Seamus Kearney, onye nta akụkọ na onye na-emepụta ihe, bụ onye mesiri ike itinye aka na mgbasa ozi na atụmatụ ndị njem na-adigide na mkpa iji eziokwu na nghọta kwupụta.
N'oge ahụ, Maazị Shanzhong Zhu, Onye isi oche UNWTO zutere DRC Prime Minister HE Bruno Tshibala, iji kpaa njikọ dị n'etiti ịgbasawanye akụ na ụba, mmepe njem na nchekwa na ichekwa ihe dị iche iche. Mazị Zhu nabatara ọhụụ nke gọọmentị nke DRC iji tinye njem nlegharị anya dị ka ihe kacha mkpa maka ịmepụta ọrụ.
Mkparịta ụka nke ndị ozi metụtara ndị ozi nke njem nke DRC Franck Mwe di Malilia Apenela na nke Niger, Ahmet Botto, tinyere odeakwụkwọ na-adịgide adịgide nke Ministri nke njem na ismlọ Ọgwụ nke Zimbabwelọ Ọgwụ nke Zimbabwe, Dr. Thokozile Chitepo na UNWTO Executive Director, Shanzhong Zhu kwusiri ike. mkpa nke nkwukọrịta njikọ na ikike nke itinye ndị ọrụ njem njegharị na usoro nchekwa anụ ọhịa.
Itinye aka na obodo, imepụta mmemme izi ihe banyere njem nleta na ịmatakwu banyere ụdị dị iche iche nke ndụ na anụ ọhịa bụ ụfọdụ isiokwu akọwapụtara na arụmụka a.
“Mmezu nke Afọ International of Sustainable Tourism for Development nke anyị mere na 2017, Lusaka Nkwupụta na Sustainable Tourism na Community Engagement na Africa na Akwụkwọ Iwu Afrịka nke Mbụ na Sustainable na Responsible Tourism nke COP22 nakweere bụ usoro kachasị mma iji bulie mpaghara ndi njem nlere na-adigide omume karie ma Zhu kwuru.
Dika ekwuputara ya na Nkwuputa, mba ndi na-achoputa oru a “kwadosiri ike nke ndi njem nlere anya dika ihe nlere anya maka mmepe obodo na nkwado maka ichekwaba na nchekwa nke gburugburu ebe obibi” na “itinye aka na iwusi nchekwa umu ihe di iche-iche ike, imalite mmata na ịlụ ọgụ megide ụdị dị iche iche nke iji ego eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi gụnyere ịchụ nta na ibelata akara ụkwụ carbon nke ọrụ metụtara njem ".
Strategic Communications di na nkuku nke ichebe ohia
N'akụkụ Nzukọ Nzukọ mpaghara, ndị nnọchi anya sonyere na nkuzi ọzụzụ na nkwukọrịta na mmekọrịta mgbasa ozi na usoro UNWTO / Chimelong. N'okpuru isiokwu nke ịkọwa njikọ dị n'etiti anụ ọhịa na njem nleta na-adigide, ndị nnọchi anya nyochara ikike nke anụ ọhịa n'ịkwalite ebe ha na-aga ma gbanwee usoro nkwukọrịta na usoro nwere ike ịkwado ọrụ ha.
Ihe omumuihe a gunyere nlezighari uzo nke uzo di nkpa na uzo esi ekwuputa ihe di iche-iche ya na uzo di iche nke usoro mgbasa ozi. Okike nke ihe ohuru iji duta mmasi ndi oru nta akuko, iwulite mmekorita nke ntụkwasị obi na ndi oru mgbasa ozi na inye ndi na-enye ikike ikike dika ndi n’etinye nchekwa umu anumanu na njem nleta na-adigide. Site na ndị otu na-arụ ọrụ nwere ohere ịwulite usoro nkwukọrịta maka ngwaahịa ndị njem ha, dị ka ogige nke Zongo na Malebo na DRC.
Ihe omumu ihe omuma a na Nkwukọrịta na Mmekorita Mgbasa ozi yana Mgbakọ mpaghara na-eme n'ime usoro UNWTO / Chimelong Initiative na Conservation Wildlife na Sustainable Tourism. Ebumnuche a, nke a na-etinye n'ọrụ n'etiti 2017 na 2019, na-ekwu banyere ohere nke njem na-adịgide adịgide dị ka isi ihe na-eweta nchebe na nchekwa anụ ọhịa n'Africa na Eshia. Mmemme ahụ jikọtara iwulite ikike nke ọchịchị njem nleta, itinye aka na mgbasa ozi na isiokwu ndị a gụnyere Onyinye Mgbasa Ozi na mmepe mmepe site na mmemme mmekọrịta, n'etiti omume ndị ọzọ.